ပန်ဒိုရာ: အာဏာရှင်တစ်ဦးကို နားလည်ကြည့်ခြင်း နှင့် နောက်ဆက်တွဲများ
Posted by pandora at 3:20 PM
မပန် နောက်ဆက်တွဲ အတော်ကောင်းတယ် :)
၂၀၀၆ခုနှစ်အတွက် အော်စကာဆု၊ရျွှေကမ္ဘာလုံးဆု နဲ့ အမ်မီဆုတွေကို သိမ်းကျုံးယူသွားနိုင်တဲ့ Forest Steven Whitaker ဟာ ပရိသတ်ရင်ထဲမှာ၊ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲမှုတွေကိုမုန်းတီး ရွံရှာ ကြောက်လန့် ခြင်း များစွာ ဖြစ်စေတဲ့အထိ ယူဂန်ဒါ က အာဏာရှင်၊အာဏာရူးတစ်ယောက်ရဲ့သရုပ်ကိုအပီပြင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဇာတ်ကောင်ရွေးချယ်ထားမှုက Forest Steven Whitaker ရုပ်ကလဲ အပြင်က ၁၉၇၁ က ယူဂန်ဒါအာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် Idi Amin Dada နဲ့ လဲအတော်လေးဆင်တူနေတာပါပဲ။ ဒီ Idi Amin Dada ဟာတန်ဇန်နီးယားကပြည်နယ်တစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ လုပ်တဲ့အတွက် ၁၉၇၈မှာ ယူဂန်ဒါ-တန်ဇန်နီးယားစစ်ပွဲဖြစ်စေခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားခံစားမှုသက်သက်ထက် နောက်ဆက်တွဲအမြင်နဲ့ သုံးသပ်ချက်များက စဉ်းစားစရာကောင်းတာမို့ ပန်ဒိုရာ ရဲ့အားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးလဲ ဝေမျှနိုင်ပါစေ..
"It is not power that corrupts but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it..."
ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စကားကိုသာ သတိရမိတော့တာပဲ။ မပန်ရေးထားတဲ့ conversation ကလည်း ဒီကားရဲ့ အနှစ်ပဲ... "You did not persuade me" တဲ့လား...
ဒီဇတ်ကား မကြည့်ဖူးပါဘူး ပို့ စ်မှာပြည့်၂စုံ၂ ဖော်ပြပေးတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ တွေးစရာတွေလဲ အများကြီး ရသလို ဗဟုသုတလဲအများကြီးပါ အောက်ကစာသားလေးကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ
"ငါလုပ်ပေးမှ ဖြစ်မယ်။ ငါလုပ်နိုင်တယ်။ ငါကသာလျှင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတာ ဆိုတဲ့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနဲ့ တာဝန်ယူမှုရှိတာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့ရဲ့ အရည်အချင်း တစ်ရပ် ဖြစ်မှာပါ။ သို့သော် လူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက် တောင်းဆိုချက်များကို မျက်ကွယ်မပြုပဲ တုံ့ပြန်မှုဟာလည်း ကိုယ့်အလုံးစုံ အာဏာကို ပြန်ထိန်းချုပ်ပြီး အမှားအယွင်းနည်းအောင် စီမံနိုင်စေဖို့နဲ့ ပြည်သူတွေ လက်ခံကျေနပ်စေဖို့ လိုအပ်ပြန်တယ်။ Responsibility နဲ့ Responsiveness ကို မျှတအောင် ထိန်းထားနိုင်မယ့် စနစ်တစ်ခုကို တကယ်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဆိုတာကတော့ "
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ်စာညံ့တော့
စောကြောမိမှာမဟုတ်ဘူး သုံးသပ်ချက်နောက်ဆက်တွဲတွေကို တအားကြိုက်တယ်ဗျ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ :)
အီဒီအာမင်ဟာ အလွန်ရက်စက်ကြမ်းကြုပ်ပြီး သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာတော့ တော်တော်ရွံဖို့ကောင်းတဲ့ အာဏာရှင်ပါ။ ဘယ်လိုရွံဖို့ကောင်းလဲဆိုတာ ခင်ဗျားမြန်မာဖြစ်နေရင် သိပြီပေါ့။
နိုင်ငံတကာက မီဒီယာသမားတွေကို ပြည်ဝင်ခွင့်ပေး၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး အပြန်မှာ ကားကို ဂျောက်ထဲတိုက်ချပြီး လက်စဖျောက်ဖူးပါတယ်။ လူမမယ်သားကိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်ခန့်ထားလို့ စစ်ရေးပြမှာ ကလေးက ဆော့နေတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ဗျား။ ငြိမ်ငြိမ်နေပါလို့ ပြောကြရသတဲ့။
အစကတော့ Emotional ကို အသားပေးခဲ့တဲ့ မျိုးချစ်လို့ ပြောရမလို လူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အာဏာဟာ ရပြီးသူကို ယစ်မူးစေတယ်။ စွဲစေတယ်။ အထင်အမြင်မှားစေတယ်။ ရှေးကလည်း သင်ခန်းစာတွေရှိခဲ့တယ်။ ခုလည်း ဒါမျိုးတွေ ထပ်ဖြစ်နေတုန်းပဲ။ ဘယ်တော့များမှာ ဘယ်သူတွေ သင်ခန်းယူတတ်မလဲ။ အာဏာဟာ ယစ်မူးစေတတ်သမျှတော့ ဒါမျိုးတွေ ရှိနေမလားပဲ။ ထိုင်ခုံရပြီးရင် မထချင်ကြတော့ဘူး။
နောက်ပြီး ဟိုတယ် ရ၀မ်ဒါလည်း ရှိသေးတယ်လေ။ အဲဒါလေးလည်း ရေးပေးစေချင်တယ်။
နောက်တစ်ကားရှိသေးတယ်ဗျ။ အဲဒါကတော့ အာဏာရှင်ကို တွန်းလှန်တဲ့ကားလေ။ နာမည်က ပါးစပ်ဖျားတင် မေ့နေတယ်။ မျက်နှာဖုံးနဲ့လူ။ သူက စ အာခံတာ။ နောက်တော့ တစ်နိုင်ငံလုံး မျက်နှာဖုံးတွေ စွပ်ပြီး အာဏာရှင်ကို စုပေါင်းတော်လှန်လိုက်တဲ့ အကြောင်း။
တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းမဲ့ ရုပ်ရှင်ပါပဲ။ အခွင့်ရှိ၇င် ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။
မောင်သင်္ကြန် ကိုမောင်ရင် မတန်ခူး ကိုပု မောင်မျိုး ညိမ်းညို ကိုသင့်ကာ အလေးအနက် မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူး။
ဟုတ်တယ် တကယ်တော့ ပြောစရာတွေ အများကြီး ကျန်သေး။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မျက်နှာပြောင်တိုက် ဗြောင်လိမ်တဲ့အခန်းလည်း သဘောကျမိ။ . သြော်.. အာဏာရှင်တွေများ..။
ထူးမြတ်ရေ .. ကြည့်သင့်ပါတယ်
There is another one about him and his madness. " Rise and Fall of Idi Amin" (1981)
ရုပ်ရှင်အရင် ကြည့်ပြီးမှာ ဒီပို့စ်ကို ဆုံးအောင် လာပြန်ဖတ်မယ်...
အခန်းတစ်ခုထဲကို အရင်ရောက်လာသူက နောက်မှ ရောက်လာသူကို ဆက်ဆံသလို
ယဉ်နောက်လိုက်က ကားပေါ်မှာ အာဏာပြလိုက်လို့ ရုံးရောက်မှ လာသမျှ လူထုကို ပြန်ပြီး အတိုးချ ကြိမ်းမောင်းတတ်တဲ့ ရုံးလုလင်လေးတစ်ယောက်လို
မောက်မာတဲ့ အကြီးအကဲကို ဘယ်လောက်ပဲ မကျေနပ်ပေမယ့် အဲဒီအကြီးအကဲရဲ့ သြဇာအာဏာကြောင့် စားသာနေတဲ့ ယဉ်မောင်းလေးတစ်ယောက်လို
ကျွန်တော်တို့ အတော်များများဟာ အာဏာကို အတွင်းစိတ်ထဲက မမုန်းတတ်ကြသေးဘူး။
Idi Amin ရဲ့ ဘ၀အကြောင်း စာအုပ်ကို ဖတ်ရတုန်းက ယူဂန်ဒါနိုင်ငံကို အတော်ကြာကြာ သွားနေဖူးသလိုပဲ။ :D
ကျွန်တော်တို့ အများစု (အားလုံးကို မဆိုလိုပါခင်ဗျ) အာဏာကို မသိမသာလေး မက်မောနေပုံကို ပို့စ်တစ်ခု ရေးမလို့ ကြံစည်နေတာ။ အခုတော့ မပန်ဆီမှာပဲ ရေးလိုက်တယ်ဗျာ။ မပန်က အတော်လေး ပြောပြီးနေပြီဆိုတော့ ဘာမှ ထပ်ရေးစရာ မရှိတော့ဘူး။
ဒီပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးပဲ မပန်ရေ။
အဲဒီ စာအုပ်ပြန်ရှာလို့ရရင် အချို့အခန်းလေးတွေ ပြန်မျှမယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီ နိုင်ငံနဲ့ တော်တော်လေး ရင်းနှီးနေသလိုပဲဆိုတာ ပိုပြီး သိသာလာအောင်လို့ပါ။
ဒါနဲ့ Idi Amin ကို မျိုးချစ်သူရဲကောင်းလို့ သတ်မှတ်တာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ပါ။ သူက သူနဲ့ လူမျိုးစုမတူတဲ့သူတွေကို အစုလိုက် သတ်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်လို့ သူ့အကြောင်းစာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်မိပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူနဲ့ လူမျိုးစုတူတဲ့သူတွေအတွက်တော့ သူက မျိုးချစ်သူရဲကောင်းဖြစ်မှာပါခင်ဗျ။
သူနဲ့ လူမျိုးရေး စစ်ပွဲတွေ အကြောင်း wikipedia မှာလည်း တွေ့မိတယ်ခင်ဗျ။
အပေါ်မှာ MMThinker ပြောထားတဲ့ Hotel Rwanda လည်း The Last King of Scotland လိုပဲ သွေးပျက်လောက်တဲ့ အဖြစ်ဆိုးတွေထဲကနေ နိုင်သလောက် တာဝန် ၀င်ယူတဲ့ အကြောင်း ရိုက်ထားတာ ကောင်းတယ်ခင်ဗျ။ မပန်ကြည့်ပြီး ပြန်ရေးပေးရင် ကောင်းမှာပါခင်ဗျာ။